Wax ka baro Mahad Salaad shaqsiguu yahay…
Mahad Salad waxaa soo maray fursado badan uu ku kasban karay magac iyo maamuus. wuxuu ahaa Madaxweynihii hore ee Hasan Sheikh Mahamud gacantiisa midig. Afarta xukumad ee madaxweyne Hassan Sheikh xil ayuu kasoo qabtey. Mahad Salad Markii uu Wasiirkii Madaxtooyada iyo la taliyaha xaga Gobolada dhexe ee MW HSM ahaa waxaa lagu xasuustaa isagoo ka geeystay dhibaatooyin balaaran Gobolada dhexe gaar ahaan magaalooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb. Wuxuu ku abaabuley degaanadas dagaal taasoo sababtey Gaajo iyo barakac.
Waxaan arkey dadyow ka doodaayo in Xukumadihii madaxweyne Hassan Sheikh ay eheed xukumada ugu musuqmaasuqa badneeyd ee soo marta Soomaliya. Aniga maqabi madaxweyne Hassan Sheikh inuu ahaa qof musuqmaasulow ah, laakiin eedeymaha xukumadiisa ka sumcad beeshey uu masuul ku aha Mahad Salad. Mahad Salad waa shaqsi aad u jecel inuu ku tagri falo hantida guud ee dowlada iyo shacebkeeda. Meesha yar caqabad ku dareemana wuxuu adeegsada odey dhaqameedka sida Ugaasyada iyo kuwa lagu yiqiin maslaxada beesha uu ka dhashay. Qabiilka wuu ka daneesta.
Mahad Salad markuu ahaa Wasiirkii Madaxtooyada iyo la taliyaha xaga Gobolada dhexe ee MW HSM ayaa daabulayay lacagihii ka imaaneeysay Xisbiga madaxweyne Hassan Sheikh Peace and Development Party (PDP) uu ka midka ahaa, lacagahaas ayaa u adeegsaday laaluush iyo qarbudaad, boos gadasho taasina waxa eey keentay in wadamada caalamku geliyaan Mahad Salad(liiska wasiirada laalushka wax ku bixiya).
Mahad Salad wuxuu ka midyahay golaha shacabka ee barlamaanka Federalka. Wuxuu matala deegano hoos taga maamulka goboleedka Galmudug. Xiliga doorashooyinka dadban ee heer maamul goboleed ee 2016ka, beesha caalamka gaar ahaan dowlada mareykanka waxaay gudiga doorasha iyo Mahad Salad ku eedeyen in Mahad Salad kusoo baxay doorashada si musuq ah. Mahad Salad asagoo adeegsanaayo awooda madaxtooyada wuxuu xabsi dhigey tobanan qofood oo u xirey xaga afkaarta marka ay mucaaraden hab dhaqankiisa siyaasadeed.
Baryahan dawlada Soomaaliya waxaa ku furunyahay buuq iyo mooshin lagu ridi rabo xukumada hada jirta oo Mahad Salad masuul ku yahay. Qaskan waxaa imaadey markii heshiis Mahad Salad la saxiixdey dowalada Itoobiya 2016kii markuu Wasiiru-Dowlaha Madaxtooyada aha- oo dowlada hadda jirta dhaqan gelisey ama fulisey heshiishkas ee “la dagaalanka argagixisada iyo kooxaha nabadiidka ee labadda dal” (Itoobiya iyo Soomaaliya).
Mahad Salad muxuu doonaaya??
Mahad waxaa dagaal wuxuushnimo kula jira dowlada hada jirta oo hogaaminaayo Madaxweyne Mohamed Abdullahi Farmaajo. Dagaalkan wuxuu bilaabey markkii Mahad Salad oo beeshisha ku soo aadey wasiirka arimaha dibbada. Mahad Salad wuxuu aha shaqsiga ugu cad-cad oo wasaarada loo magacaabi doono sababto ah horey ayuu wasiir ku xigeenka wasaarada arrimaha dibbada ugu soo qabtey xukumada MW Hassan Sheikh. Laakiin Ra’iisul Wasaare Hassan Kheyre markuu dib u fiiriyey rikoodhka Mahad Salad, damiirkiisa wuu siin waayey inuu u magacaabo wasiirka Arrimaha dibada, ee wuxuu ka doortey rugcadaaga weynaa ee BBC-da Suxufi Yussuf Garaad Omar. Dagaalka, shacab kicinta, iyo mooshinka hadda uu wadwado wuxuu ula dan leeyahay inuu xukumada hadda jirta la rido sii xukumada lasoo dhisi doono asiga ugu soo muuqan laha.
Shaqsiga maanta Xildhibaan qaran sheeganaya oo doonaya cadaalad iyo dowlad-wanaag in oo ka hadlo wa shaqsi noocaas ah.
Halkan Ku aqriso Fahfaahin dheerad ee Taarikhda Mahad Salad
Petroleum and the Islamic Pilgrimage: Saudi’s Abuse of Political Power on Islam…